Khin Kalyar Soe – စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနဲ့ “ခြားနားခွန်” ပြသနာ | MoeMaKa Burmese News & Media
Khin Kalyar Soe – စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနဲ့ “ခြားနားခွန်” ပြသနာ
ခင်ကလျာစိုး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၂
10 Responses to Khin Kalyar Soe – စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနဲ့ “ခြားနားခွန်” ပြသနာ
dragon on April 27, 2012 at 1:50 pm
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အခွန်​တွေထဲ ခြားနားခွန်ဆိုတာ မ​တွေ့ပါ။ သံရုံးက အ​ကောင်တွေ လူလည်ကျနေတာ မယုံနဲ့မပေးနဲ့ငါ မြန်မာအခွန်ရုံးတွေကို​မေးပြီးပြီ မဟုတ်ဘူး
ohnmar on April 27, 2012 at 2:32 pm
ခြားနားခွန်= ဝါးတီးခွန် ။
အစိုးရဝန်ထမ်း= ကြိုးကြိုးစားစားအလုပ်မလုပ်ချင်ဘဲအချောင်နှင့်သူဌေးဖြစ်ချင်သူများ၊ လက်နက်အားကိုး
Corruptors to be caned/ flogged esp Burma Emb in Singapore on April 27, 2012 at 4:01 pm
Send same copies to
1. Send them by registered mail x3copies to Myanmar embassy Singapore .
2. duplicate copies to Myanmar Media ( Myanmar TV, Eleven Media ) etc
3. copies to Thein Sein’ s advisory committee x two copies
4. Nay Pyi Daw Hluttaw Parliamentarian random x 15 copies
5. also address to U Shwe Mann
6. To U Htay U , who is current ruling party leader
7. U S A / England/ Singapore Embassy in Burma x2copies each
8. Newly formed ‘ Medial organization ‘ , I think Maung Wan Ta is head. x send two copies.
Write good writing .
do it as soon as you seen this message.
do it as ‘ National ‘ duty.
Don’t forget stamps.
But I am sure you will see the very very very good ‘ difference ‘
You may add some more addressees.
Do it asa‘ gentle mean ‘ way.
very politely but very effectively.
I am sure by seeing this message ‘ they are trembling ‘ .
Once and for all – it has to be ‘ removed from the ROOT ‘ . ‘ Plucked out from the root ‘
send this message as well.
There arealot of Singaporean Burmese blood is ‘ boiling hot ‘ . For RIPPING OFF by those ‘ Illegal blood suckers ‘
Don’t just say asa‘ ventilating of your hard feelings’ in this post.
don’t just ventilate.
Calm down. Write letters. and Send.
Make sure you have your ‘ contact details ‘ phone/ email/ mobile phone/ land line phones. and contactable times. You don’t need to be afraid.
This is the time to ‘ get rid of this bloody bad habit’ . Any kind of GOD will love you.
Don’t get placated. ( don’t get ‘ Pyar Yay neth, Woon Cha Ma Khan Neth ) ad interim.
mankyi on April 27, 2012 at 11:18 pm
ကျက်သရေမဲ့တဲ့ အစိုးရရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်ရပ်တွေကို အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာ ကြားနေရတာ နေ့စဉ်နှင့် အမျှပါပဲ ။ မကြားချင်မှ အဆုံးပဲ ။ ဘယ်လို အကုသိုလ်ကောင်တွေနဲ့ ကြုံနေ တွေ့နေ ကြားနေရပါလိမ့် လို့ တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိပါတယ်။ မတရားတာ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် မြန်မာအစိုးရဟေ့လို့တောင် အော်မလားမှတ်ရတယ် ထိပ်ဆုံးက လက်ညှိုးထောင်မယ့်သူတွေ ။ အကုသိုလ်ကောင်တွေ အကြောင်းရေးရတာ ကိုယ်ပါ အကုသိုလ်များပါတယ်
maungmaung on April 28, 2012 at 7:36 am
အမှန်က Singapore မှာ PR/EP – 120$, Spass – 80$ ဆောင်ရမှာစိုးလို. မြန်မာပြည် မှာ $40 နဲ.ပြန်ဆောင်ပြီး အခုမှ ပြသနာတက်လို. အသံထွက်လာတာပါ။ သံရုံး ကိုယ်စားရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို. Sg မှာဘဲ သတ်မှတ် တဲ. နှုန်းနဲ. အခွန်ဆောင်ထားတဲ.သူတွေပါ။
truth on April 28, 2012 at 5:02 pm
မြန်မာပြည်မှာ $40 နဲ.ဆောင်တော. ဘာဖြစ်လဲ ..
အမှန်က ဥပဒေအရ ပေးစရာမလိုတဲ.ဟာကို ပေးနေရတာကို လွန်လှပြီ
သူများတိုင်းပြည်မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်မှ ပိုက်ဆံရတာကို ခေါင်းပုံဖြတ်ချင်တယ်
ကိုယ်.လုပ်အားနဲ. ဝင်ငွေရတဲ.သူအတွက် ၁ကျပ်လဲ ပိုက်ဆံပဲ
truth on April 29, 2012 at 10:42 am
ကျမလဲ စလုံးမှာ သတ်မှတ်ဈေးနဲ.ပဲ ဆောင်တာပါ
ဒါပေမဲ. မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး $40 နဲ.ဆောင်တဲ.သူအပေါ် ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး
မြန်မာပြည်က အခွန်ဌာနကတောင် လက်ခံသေးတာပဲ
ရဲရင့် on April 28, 2012 at 10:01 am
မကျေနပ်ရင် သံရုံးဗုံးခွဲပလိုက်ကွာ ရှုတ်တယ် …
jstsawsaw on April 28, 2012 at 8:01 pm
မြန်မာပြည်မှာ အခွန်ပြန်ဆောင်ရင် ဟိုမှာပဲစာအုပ်တစ်ခါထဲတိုးခဲ့ပေါ့ကွ။ ဟိုမှာဆောင်ပြီး ဒီမှာ
စာအုပ်တိုးလို့ကတော့သံရုံးကပြောပြီပေါ့ကွ။ ငါတို့ကတော့ခပ်တင်းတင်းပဲ တစ်လ ၈၀နဲ့စလုံးသံရုံးမှာဆောင်တယ်။ ပေးချင်လို့တော့မဟုတ်ဖူးကွ။ မြန်မာနိုင်ငံမပြန်နိုင်သေးလို့။
သံရုံးကကောင်တွေက ငါတို့ကျွေးတဲ့ထမင်းစားပြီး ငါတို့ကိုစော်ကားနေတဲ့ကောင်တွေကွ။။
sandar on April 29, 2012 at 12:00 pm
hi khin kalyar soe, i know y u made payment 40 dollar tex in myanmar because of u dont have money to pay 80 or 120 dollar in singapore embassy right? so y u never renew ur passport in myanmar ?we pay in singapore 80 dollar so no problem for us. u dont try to cheat.shame to u khin kalyar soe.